पाकिस्तान यु’द्धको अन्तिम तयारी गरिरहेको भारतको आरोप ! - Nepal Insider
Breaking : सिनामंगलमा भयानक दुर्घटना, एकको घटनास्थलमै मृत्यु
आज अदालतमा अस्मिता कार्कीले राखिन् यस्तो माग ! हेर्नुहोस् के थियो उनको माग
Home/अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/पाकिस्तान यु’द्धको अन्तिम तयारी गरिरहेको भारतको आरोप !
काठमाडौं । जम्मू–कश्मीरमा धारा ३७० हटाएपछि पाकिस्तान लगातार विरोध जनाउँदै आइरहेको छ । भारतले एकतर्फि रुपमा धारा हटाउन खोजेको भन्दै पाकिस्तान लगातार भारत विरुद्ध एकपछि अर्को कदम उठाउँदै आइरहेको छ । विशेष श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार पाकिस्तान भारत विरुद्ध अन्तिम यु’द्धको तयारी गरिरहेको छ । पाकिस्तानले लद्दाखको स्कर्दूमा लड़ाकू विमान तैनाथ गरिरहेको खुल्न आएको छ ।
दुखत खबर,कमाउन भारत गएका सन्तोष को मृत्यु…
उत्तर कोरियाले नेपालमा साइबर हमला गर्दै, नेपालमा सतर्कता अपनाउन आग्रह भन्दै वीवीसीले गरायो सचेत
चीनले भन्यो, ‘हामी सधै नेपालको प्रगति, बिकाश र नेपालको खुसि देख्न चाहन्छौँ’